सा’वधान ! चिया पिएपछि यी ३ चीज भुलेर पनि नखानुहाेला ! नत्र पछुताउनु पर्ला ! (भिडियाेमा हेर्नुस्) – Kavreonline Patra
मुख्य पृष्ठ /Health/सा’वधान ! चिया पिएपछि यी ३ चीज भुलेर पनि नखानुहाेला ! नत्र पछुताउनु पर्ला ! (भिडियाेमा हेर्नुस्)
सा’वधान ! चिया पिएपछि यी ३ चीज भुलेर पनि नखानुहाेला ! नत्र पछुताउनु पर्ला ! (भिडियाेमा हेर्नुस्) । हरे’क दिनको सु’रुवात हामी मध्ये धेरैको चि’याबाट हुन्छ । बिना चीया बिहान र बेलुका कल्पना पनि गर्न स’क्दैनौ । एकपटक चियाको बानी लागेमा त्यसको लत लागिरहन्छ र समय समयमा खोजिरहन्छ । कामकाजी मानिसहरु आफ्नो कामको थकान मेटाउनलाई पनि चिया पिउने गर्छन् ।
चिया पिउनाले हाम्रो शरीरलाई पनि धेरै लाभ मिल्छ । चियामा हुने एं’न्टीअक्सिडेन्टले केही प्रकोपबाट र`क्षा गर्छ । यसको साथै चियामा अन्य पनि धेरै त्यस्ता तत्व हुन्छन जसले शरीरलाई ला’भ पुर्याउछ । मानिसहरुले चियासँग बिस्कुट वा नमकिन पनि खान मन पराउछन्, तर कहिलेकाहीँ यस्ता चीजले हाम्रो शरीरमा हा ’नी पुर्याउन सक्छन् । आज हामी यस्तो चीजको बारेमा जानकारी दिन चाहान्छौ, जुन कुरा चियासँग सेवन गर्नुहुँदैन । यदि सेवन गरेमा गम्भीर बिरा’मी हुनपनि सकिन्छ ।
तातो चिया पिउने बित्तिकै पानी पिउन हुँदैन, त्यस समयमा पानी पिउँदा घा’`तक सिद्ध हुनसक्छ । चिया पिउने बित्तिकै तुरुन्त पानी पिउनाले हाम्रो नाकबाट र`गत आउन सक्छ । मानिसहरुलाई मुला सेवन गर्दा अनुहार र कपाल सफा हुने सम्भावना हुन्छ भन्दै अक्सर खाने गर्छन् । तर चिया पिएपछि कहिल्यै मुलाको सेवन गर्नु हुँदैन । यदि चिया पिएपछि बेसार भएको दुध पिएमा जन्डिस रो’ग लाग्न सक्छ । यसकारण चिया पिएपछि बेसार हा’लेको दुध पिउनबाट बच्नु पर्छ ।
घरमा कोहि आउँदा वा कसैको घरमा जाँदा मात्र होइन साथीभाई भेटघाटमा समेत चिया पिउने चलन छ | केहि महत्वपूर्ण सल्लाह वा हालखबर आदानप्रदानका लागि समेत हामी चिया पसल पुगेर चिया पिउने गर्छौं | यति प्रचलित चिया संस्कारको अवगुण भने हामीले कमै ख्याल गर्ने गरेका छौं | यस बारे केहि तथ्यहरु हामीले यहाँ प्रस्तुत गरेका छौं |
क) अधिकांश नेपालीले बिहान चिया पिउछन् । के बिहान खाली पेटमा चिया पिउनु राम्रो बानी हो ? बिभिन्न अनुसन्धानले खाली पेटमा चिया पिउदा स्वास्थ्यलाई धेरै हा`नी हुनसक्ने देखाएका छन् ।
ख) चियामा कैफिन र टैनिन पाइन्छ जसले शरीरलाई उर्जा दिन्छ । चियामा दूध मिसाउदा चियामा पाइने ए`ण्टिअक्सिडेन्ट न“ष्ट हुन्छ ।
ग) ब्रिटिस मेडिकल जर्नलमा छापिएको अध्ययनअनुसार तातो चिया पिउने मानिसमा खाना खाने नली तथा घाँटीको क्यान्सर हुने सम्भावना आठ गुणाबढी हुन्छ ।
घ)चिया पिउनुका फाइदा नभएका होइनन् । तर खाली पेटमा पिउने, धेरै पिउने र धेरै गुलियो चिया पिउदा स्वास्थ्यलाई असर गर्छ । दूध चिया भन्दा कालो चियाले फाइदा गर्छ तर कालो चिया पनि धेरै पिउनु हुदैन ।
ङ) खाली पेटमा दूध चिया पिउदा थकान बढ्ने, ए`सिडिटी बढ्ने हुन्छ । यसले पेटको अल्सर पनि हुनसक्छ । दिनमा ५ कप भन्दा बढी चिया पिउने मानिसलाई प्रोस्टेट क्यान्सर हुनसक्ने बिभिन्न अध्ययनहरुले दखाएका छन् ।
च) दूध चियाले मोटोपन बढाउछ । चियाले मधुमेहका बिरामीमा चिनिको नियन्त्रण बिग्रन सक्छ । दूध चियाको अर्को नराम्रो पक्ष भनेको कोलेस्टेरोल हो ।
छ) दुध चियामा चियापत्तिको बढि प्रयोग हुन्छ । जुन स्वास्थ्यका लागि हा`निकारक हुन्छ । चियापत्तिको बढी प्रयोगले शरीरमा क्याफिनको मात्रा बढी भएर मुटुको चालसम्बन्धी समस्या उत्पन्न हुनसक्छ । ज) तातो चियाले घाँटीमा रहेका नरम तन्तुहरुलाई क्षति गर्छ ।